ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းဖွဲ့စည်းခြင်း & စီးပွားရေး Startup စာမျက်နှာ
ကျနော်တို့ကအကြောင်းပြောဆိုခင်မှာ ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကျနော်တို့ကနည်းနည်းနောက်ခံသတင်းအချက်အလက်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အရှေ့တောင်အာရှတွင်အနောက်ပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး 7,000 ကျော်ကျွန်းအုပ်စုတစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့လုံးနှင့်အမျှဤကျွန်းများတစ် Unitary အခြေခံဥပဒေသမ္မတအိမ်တော်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကတရားဝင် "ဟုဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်ကြသည်။ မနီလာက၎င်း၏မြို့တော်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် 115,800 စတုရန်းမိုင် (301,000 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ၏ဧရိယာနှင့်ကမ္ဘာထဲမှာအာရှနှင့် 101th အတွက် 8th လူဦးရေအများဆုံးတိုင်းပြည်လူဦးရေအများဆုံးအောင်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 လူဦးရေသန်းရှိပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင် 1521 အတွက်စပိန်တို့ကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ကိုလိုနီခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါကျွန်းများစပိန် 1898 အတွက်စပိန်-အမေရိကန်စစ်ပွဲ၏ရလဒ်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖို့ဖိလစ်ပိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်။ 1946 ခုနှစ်တွင်, ဖိလစ်ပိုင်လွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်အဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း 1906 ၏ကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေအားဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကုမ္ပဏီ : ဖွဲ့စည်းရေးအပါအဝင်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပြီး
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာထည့်သွင်းကော်ပိုရေးရှင်းများ၏အန္တရာယ်နှင့်တာဝန်ယူမှုကိုသာကော်ပိုရေးရှင်းကန့်သတ်ထားပါသည်ဆိုလိုသည်။ အခြေခံအားဖြင့်ပိုင်ရှင်များနှင့်ရှယ်ယာရှင်များတာဝန်ယူမှုကိုယူမသွားပါလိမ့်မယ်။
• တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကိုလည်းငါးဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
• အင်္ဂလိပ်: ဟောင်းတစ်ဦးအမေရိကန်ပိုင်နက်အဖြစ်, အင်္ဂလိပ်အရာရှိကဒုတိယဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်၎င်း၏လူဦးရေရဲ့အများစုအားဖြင့်ပြောပြီ။
• အနိမျ့လုပ်အားခ: ဖိလစ်ပိုင်စကားပြောအင်္ဂလိပ်မှပေးဆောင်လုပ်ခအလွန်နိမ့်ဖြစ်ကြသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းယခင်ကရှိပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းများကမှတ်ပုံတင်မထူးခြားတဲ့ကော်ပိုရေးရှင်း name ကိုကောက်ရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတစ်ကော်ပိုရိတ်နာမရရှိမှုများနှင့်အမည်အားမှတ်ပုံတင်ပြီးစီး, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ် SEC ရုံးသို့မှာဖျော်ဖြေရနိုင် Mandaluyong.
ဖိလစ်ပိုင်မှာအသီးအသီးရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးအားများသောအားဖြင့်ရှယ်ယာနှုန်း P100.00 ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာထည့်သွင်းသည့်အခါကော်ပိုရေးရှင်းဒါရိုက်တာများနှင့်၎င်းတို့၏အမည်များအရေအတွက်ကိုပေးရမညျ။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးထဲဆွဲသွင်းပါဝင်အဲဒီမှာဖြစ်ရမည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးငါးနှင့်မတဆယ်ဒါရိုက်တာများထက်ပိုရှိရမည်။
အခြို့သောအရာရှိများနှင့်၎င်းတို့၏အမည်များကိုစာရင်းပြုစုထားခံရဖို့လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားအရာရှိများဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ, သမ္မတ, ကော်ပိုရိတ်အတွင်းရေးမှူး (သူကိုဖိလစျသူဖြစ်ရမည်), နှင့်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ္ဍာရေးမှူး (လည်းဖိလစျသူဖြစ်ရမည်သူ) တို့ပါဝင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အချိန်မှာ paid-up, မြို့တော် Php 5,000 ထက်လျော့နည်းမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ သို့သော် paid-up, မြို့တော်မြင့်မားသောပမာဏပညတ်တရားအားဖြင့်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ မြင့်မား paid-up, မြို့တော်လိုအပ်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများစာရင်းတစ်ခု www.sec.gov.ph. မှာထင်ရှားစေခြင်းငှါ
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း 30% ၏အခွန်နှုန်းကိုပေးဆောင်။
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးကြေး P500 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါရိုက်တာအမည်များ, အရာရှိများနှင့်ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ရှယ်ယာရှင်များအများပြည်သူစံချိန်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပေမည်။ သို့သော်ဆန်ခါတင်ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ privacy ကိုပေးနိုင်ပါသည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းအနေနဲ့နှစ်စဉ်အခွန်ပြန်လာ file များနှင့်နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးစာရွက်စာတမ်းများတင်ပြရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးများလိုအပ်သည်။ ဤအအစည်းအဝေးများ၏ပုံမှန်နေ့စွဲဧပြီလ 30 ဖြစ်ပါတယ်။
ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းထဲဆွဲသွင်းပါဝင်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်လျှောက်ထားခြင်းဖြင့်လိုအပ်သည့်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများ၏နာမတော်ကိုမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ပြီးစီးပေါ် မူတည်. နှစ်ပတ်မှတဦးတည်းယူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသာသူ့ရဲ့လူဦးရေရဲ့အများစုအားဖြင့်ပြောပြီထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ရှယ်ယာရှင်, ရှယ်ယာရှင်များအဘို့ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, အင်္ဂလိပ်, နှင့်အနိမ့လုပ်ခ: အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်များအပါအဝင်ဖိလစ်ပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းကမ်းလှမ်းနေကြသည်။